क्रीम र चकलेट कट आइसक्रीम - Thermomix व्यञ्जनहरु | ThermoRecipes
चकलेट र क्रीम आइसक्रिम काटियो
मिठाई755 मिनेट10 व्यक्ति280२ क्यालोरी
यो आइसक्रीम क्रीम र चकलेट संग काटिएको आइसक्रीम जस मध्ये एक हो तपाइँ यो गर्मी मा रमाउनुहुनेछ ... र यो बर्ष को बाकी।
यदि केहि हप्ता पहिले मैले प्रस्तुत गरे रास्पबेरी आइसक्रीम कट र भनिला, अब म तपाइँलाई चकलेट संस्करण ल्याउँछु ताकि चकलेट प्रेमी उनीहरु आफुलाई आफ्नो मनपर्ने संघटक संग लिप्त गर्न सक्छन्।
सत्य यो हो कि यो संस्करण सरल र छ मिनेट को एक मामला मा तपाइँ क्रीम तयार हुनेछ र उनीहरुलाई फ्रीजरमा लैजान को लागी तयार छ।
1 चकलेट र क्रीम आइसक्रिम काटियो
2 के तपाइँ यो क्रीम र चकलेट कट आइसक्रीम को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
एक आइसक्रीम आफैंलाई वर्षको कुनै पनि सिजनमा लिप्त गर्न को लागी।
ल्याक्टोज-फ्री ह्विप क्रीम को 500 35० ग्राम (न्यूनतम% XNUMX% मिलीग्राम) चिसो
२ g० को चिसो ल्याक्टोज फ्री कन्डेन्स्ड दुध
3 स्तर चम्मच (सूप आकार) कोको पाउडर
गिलास र पुतली धेरै चिसो संग, क्रीम को 250 ग्राम र गाढा दूध को 180 ग्राम राख्नुहोस्। हामीले पिट्यौं गति ४ अर्ध माउन्ट सम्म। मेरो मामला मा, १ मिनेट र एक आधा पर्याप्त थियो। सावधान रहनुहोस् ओभरबोर्डमा जान नदिनुहोस् किनकि यो काट्न सकिन्छ।
हामी एक कटोरा मा हटाउन र फ्रिज मा आरक्षित।
गिलास वा पुतली धोए बिना, क्रीम को 250 ग्राम, गाढा दूध को 180 ग्राम र कोको पाउडर जोड्नुहोस्। हामीले पिट्यौं गति ४ अर्ध माउन्ट सम्म।
हामी चकलेट क्रीम एक आयताकार मोल्ड मा वा एक वर्ग आधार संग एक दूध को डिब्बा मा र पाक कागज संग रेखांकित खन्याउँछौं। हामी मोल्ड भर मा राम्रो तरिकाले वितरित गर्दछौं ताकि यो स्तर हो। हामी सतह चिकनी र कम्तीमा 30 मिनेट को लागी स्थिर।
समय पछि, हामी जाँच गर्छौं कि तह फर्म छ। यो पूरै कम्प्याक्ट हुन सक्दैन, मात्र क्रीम को तह समर्थन गर्न को लागी पर्याप्त छ।
हामी ध्यानपूर्वक क्रीम को परत डाल्छौं कि हामी फ्रिज मा आरक्षित छ। हामी तहलाई सम्पूर्ण सतह मा वितरित गर्दछौं ताकि यो स्तर हो र हामी सतह लाई फेरि चिकनी गर्दछौं।
हामी केहि घण्टाको लागि स्थिर गर्दछौं जबकि यो एक दिन देखि अर्को दिन राम्रो छ।
सेवा को समयमा, हामी एक सजातीय आकार को कटौती र कुकीज संग वा सुन्दर सानो प्लेट मा सेवा।
के तपाइँ यो क्रीम र चकलेट कट आइसक्रीम को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
यो मात्र3अवयवहरु संग बनेको छ ... तर के सामाग्री! क्रीम, गाढा दूध र कोको पाउडर। यस्तो सफल संयोजन हो कि असम्भव छ कि सबैलाई मन पर्दैन।
मैले योसँगै तयारी गरेको छु ल्याक्टोज मुक्त सामग्री तर यदि तपाइँ घरमा यो विशेष आहार छैन, तपाइँ यसलाई सामान्य सामाग्री संग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो आइसक्रीम धेरै सरल छ, यो मात्र छ चाल को एक जोडी जुन म तल वर्णन गर्छु:
पहिलो, तपाइँ तल राख्नु पर्छ चकलेट क्रीम किनकि यो दृढ छ, त्यसैले जब यसलाई काट्ने यो तपाइँलाई अझ राम्रो संग समात्नेछ।
दोस्रो, स्वाद मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ थप्न को लागी आवश्यक हुन सक्छ अधिक कोको। यो गर्न को लागी, केहि सेकेन्ड को लागी मिश्रण को एक सानो हरायो र यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि यो यसको आवश्यकता छ, अलि बढी कोको जोड्नुहोस्। यो सुधार गर्न को लागी अन्त सम्म पर्खनुहोस् किनकि तपाइँ पिट्न र काट्ने खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
यो आइसक्रीम बनाउन को लागी तपाइँ कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आयताकार मोल्ड तर यदि तपाइँ यो सही हुन चाहानुहुन्छ भने तपाइँ एक नजर लिनुहोस् यो नुस्खा को लागी जहाँ म बताउँछु कसरी एक दूध को डिब्बा संग सही मोल्ड बनाउन को लागी।
यो आइसक्रिम हुन सक्छ राख्न फ्रीजर मा हप्ताहरु को लागी तर यो राम्रो संग कभर राख्नुहोस् ताकि यो odors मा लिदैन।
थप जानकारी - रास्पबेरी आइसक्रीम र काटियो भनिला
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, Postres, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » चकलेट र क्रीम आइसक्रिम काटियो
नमस्ते शुभ दिउँसो
म तपाइँलाई सोध्न चाहन्छु कि कसरी tetrabrick मोल्ड मा प्वाल एक पटक धुने हटाइएको छ कभर गर्न सकिन्छ? के मैले यो कहिल्यै गरेन?
केहि आइसक्रीम मा राख्नु कुनै समस्या छैन। तपाइँ मात्र त्यो भाग को माध्यम बाट एक चाकू पास गर्न को लागी सावधान रहनु पर्छ जब तपाइँ यसलाई अनमोल्ड गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसोभए तपाइँ यसलाई एक ट्रे वा काट्ने बोर्ड मा फ्लिप गर्नुहोस् र सबै कुरा बाहिर आउँछ।
हालसालै म सामान्यतया यसलाई चर्मपत्र कागज संग लाइन। मैले यसलाई काटें, मँ यो मोल्ड को भित्री फिट गर्न को लागी मोडिन्छु र, सत्य, मँ यसलाई अनमोल्ड गर्न र हेरफेर गर्न को लागी धेरै सहज लाग्छ।
पक्षहरु लाई मात्र बिस्तारै बिस्तारै छीलो गरीएको छ र आधार तपाइँको आफ्नै हात को तातो संग थोरै तातो छ र यो सजीलै बन्द छ। तब म ध्यान दिएर कागज तान्छु र सम्पूर्ण ब्लक बाहिर आउँछ।
मलाई आशा छ कि मेरो "स्पष्टीकरण" ले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। 😉
पेड्रो Ximénez सॉस
तरकारी र माछा प्युरी